ne admin pane 2020-12-19
ne admin pane 2020-12-18
Hebei Yifan Wood Indasitiri Co, Ltd.
ne admin pane 2020-12-01
AUG: Vatengi vanobva kuArabhu vanoongorora zvinhu zvedu uye vanoshanyira fekitori yedu Ahmed akataura nesu kwenguva yakareba, muna 20TH AUG anofanirwa kuuya kuzoshanya, mushure mekutarisa masampuli edu mufekitori, akatiudza kuti ane dhizaini inoda kuchinja , takataura neyedu. mainjiniya uye gadzira ...
Ndeupi rudzi rwehuni hwakaoma huni?
ne admin pane 2019-06-03
Ndeupi mhando yehuni yakaoma yakasanganiswa huni? Hwoodwood izita rakajairika rerudzi rwehuni ine hurefu hwakanyanya uye kuomarara, senge oak, ash, ash, birch, elm, jujube, nezvimwewo Mudzimba wemuouki, ash, ash, birch, elm, jujube, ese ndeemuti wakaoma.
Chii chinonzi Citi pine? Ndeapi mashandisiro makuru eDouglas fir huni?
Chinese Zita: Douglas fir / yero cedar Chirungu Zita: Douglas fir / d-fir Mhuri: Pinaceae Genus: Taxodium Inoparara giredhi: National Giredhi II kiyi yakachengetedzwa miti yemusango (yakatenderwa neHurumende Council muna Nyamavhuvhu 4, 1999) Evergreen muti muhombe, kumusoro kusvika zana metres, DBH kusvika pamamita gumi nemaviri. Iko kuhukura kuri ...